မိုးကြီးလေကြီးမှာ ဖုန်းပြောနေရင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ – Moe Tauk Pan
အမေး – လြှပျစီးတှေ လကျနတေဲ့အခါ ပွောနတေဲ့ ဖုနျးထဲကို လထေဲကနေ တဈဆငျ့ လြှပျစီး မဝငျလာနိုငျဘူးလား ?
အဖွေ – မဝငျနိုငျပါဘူး ။ လေ ဆိုတာ လြှပျစီးကို ညှို့ယူနိုငျတဲ့ သတ်တိမရှိပါဘူး။
အမေး – တာဝါတိုငျကို မိုးကွိုး ပဈလိုကျရငျကော အဲဒီ လြှပျစီးက ကိုယျပွောနတေဲ့ ဖုနျးထဲကို မဝငျလာနိုငျဘူးလား ?
အဖွေ – ဝငျမလာ နိုငျပါဘူး ။ တာဝါတိုငျကို မိုးကွိုး ပဈခဲ့လို့ (Grounding မကောငျးခဲ့ရငျတောငျ) တာဝါတိုငျကိုပဲ ထိခိုကျသှားမှာပါ။ အပျေါက ပွောခဲ့သလို လထေဲကနေ တဈဆငျ့ လြှပျစီးကို မသယျဆောငျနိုငျပါဘူး။
အမေး – ဖုနျး ဆိုတဲ့ လိုငျးဖမျးယူဖို့ သုံးတဲ့ ပစ်စညျးက မိုးကွိုးကို သူ့ဆီရောကျလာအောငျ မဆှဲဆောငျနိုငျဘူးလား ?
အဖွေ – ဖုနျး ဆိုတာက သတျမှတျထားတဲ့ Radio Frequency ကို ဆှဲဆောငျဖို့သာ သုံးတာဖွဈပါတယျ။ လြှပျစဈကို လကေနေ တဈဆငျ့ ဖမျးယူဖို့ မဟုတျပါဘူး။ Metal နဲ့ ပွုလုပျထားတာမို့ အလှနျနီးကပျတဲ့ လြှပျစဈ စကျကှငျးကို ဖမျးယူဖို့တော့ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
အမေး – လျှပ်စီးတွေ လက်နေတဲ့အခါ ပြောနေတဲ့ ဖုန်းထဲကို လေထဲကနေ တစ်ဆင့် လျှပ်စီး မဝင်လာနိုင်ဘူးလား ?
အဖြေ – မဝင်နိုင်ပါဘူး ။ လေ ဆိုတာ လျှပ်စီးကို ညှို့ယူနိုင်တဲ့ သတ္တိမရှိပါဘူး။
အမေး – တာဝါတိုင်ကို မိုးကြိုး ပစ်လိုက်ရင်ကော အဲဒီ လျှပ်စီးက ကိုယ်ပြောနေတဲ့ ဖုန်းထဲကို မဝင်လာနိုင်ဘူးလား ?
အဖြေ – ဝင်မလာ နိုင်ပါဘူး ။ တာဝါတိုင်ကို မိုးကြိုး ပစ်ခဲ့လို့ (Grounding မကောင်းခဲ့ရင်တောင်) တာဝါတိုင်ကိုပဲ ထိခိုက်သွားမှာပါ။ အပေါ်က ပြောခဲ့သလို လေထဲကနေ တစ်ဆင့် လျှပ်စီးကို မသယ်ဆောင်နိုင်ပါဘူး။
အမေး – ဖုန်း ဆိုတဲ့ လိုင်းဖမ်းယူဖို့ သုံးတဲ့ ပစ္စည်းက မိုးကြိုးကို သူ့ဆီရောက်လာအောင် မဆွဲဆောင်နိုင်ဘူးလား ?
အဖြေ – ဖုန်း ဆိုတာက သတ်မှတ်ထားတဲ့ Radio Frequency ကို ဆွဲဆောင်ဖို့သာ သုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်ကို လေကနေ တစ်ဆင့် ဖမ်းယူဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ Metal နဲ့ ပြုလုပ်ထားတာမို့ အလွန်နီးကပ်တဲ့ လျှပ်စစ် စက်ကွင်းကို ဖမ်းယူဖို့တော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အရွယ်အစား သေးငယ်လွန်းပြီး Metal ပါဝင်မှု အလွန်နည်းပါးတာကြောင့် သူ့ဘေးမှာ တစ်ခြား အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ Metal တွေသာ ရှိနေခဲ့ရင် သူကိုယ်တိုင် လျှပ်စီးကို ဖမ်းယူဖို့ ( မိုးကြိုးပစ်ခံရဖို့ ) ရာခိုင်နှုန်း အင်မတန် နည်းပါးပါတယ်။
သူရဲကောင်းမလေးကြယ်စင်ကို 8လပြည့်ထိ ၀မ်းနည်းသတိရနေကြသော ပြည်သူများ
သိန်း၂၅၀၀ ကျော်ကို နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် အလှူငွေတွေ ထပ်မှန်ရှာပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ပန်ဆယ်လို